Oromoon biyya osoo qabuu akka uummata biyya hinqabnee ta’e. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOromoon biyya osoo qabuu akka uummata biyya hinqabnee ta’e.
Biyya isaa Oromiyaa keessa nageenyi hinjiru, dargaggoonnii fi buleeyyiin kumaatamaan hidhaatti guuramaa jiru, bilisummaadhaan hojjechuun, dubbachuunis hinjiru, namni barbaade Oromoo biyyuma isaa keessatti ajjeesuu danda’a, ajjeesees itti hingaafatamu. MNO harka Nafxanyootaa galeera, hojiin poolisii Oromiyaa Oromoota reebuu, salphisuu, hidhaatti guuruu fi ajjeesuu ta’eera. Oromiyaa naannoo ofii keessattis ta’e sadarkaa federaalaatti bakka bu’iinsa hinqabdu. Diinagdeen Oromiyaa durumaa harka Oromoo hinjirre amma qulqullaa’ee harka Nafxanyootaatti galee jira. Hariiroon hawaasummaa Oromoo summii diinni Oromiyaa keessa facaasaa jiruun weeraramee Oromoon burjaaja’eera.
Oromummaa fi Oromiyaan salphifamaniiru. Walumaagalatti Oromiyaan jiraachuun gaaffii jala galeera. Haasaadhaan osoo hintaane hojii qabatamaadhaan biyyi Oromiyaa jedhamu hinjiru, jiraachuus hindanda’u jedhamneerra.Waa’ee filannoos yoota’e ifatti nutti himamee jira—filannoon hinjiru. Haala kana keessatti waa’ee filannoo boyyoolessaa dubbachuun ofitti qoosuu, yeroo ofii gubuu, gatii wareegama gootota Oromoollee wallaaluudha.
Amma dhimma Oromoo ta’uu kan qabu biyya ofii (Oromiyaa) ‘secure’ gochuudha, waa’ee filannoo miti. Namni biyya hinqabne filachuus ta’e filatamuu hindanda’u, biyya Oromiyaa jedhamu akka qabnu mirkaneeffachuu fi ‘secure’ gochuutu waan hunda dursa. Mariin mooraa qabsoo Oromoo keessaa waa’ee hireree ofii ofiin murteeffachuu ta’uu qaba. Jecha biraatiin dhimmi Keeyyta 39 handhuura maree siyaasa Oromiyaa ta’uutu irraa eegama; yerootu kana gaafataa jira. Gaafas kabajamna, gaafas malli ittiin Oromiyaa ‘secure’ goonu asba’a, gaafas ulfinaan ‘negotiate’ goona. #Oromia_needs_to_table_article_39_constitutionally_or_otherwise #Abiy_Must_Go
ILAALCHA: “Hireen Keenya, Harka Keenya Jira”
– Dr Etana Habte
– Zak Kedir Dube
Gaggeessaan: Kiya Segni
Nafxanyootni Biltsiginnaa Gamachis Bali Jilo hidhuun nama gaddisiisa. Hidhaan Nafxanyootaan gaggeeffamu bal’inaan Oromiyaa keessatti ega adeemuu eegalee waggaa lamaaf adeema. Amma yeroon yeroo itti Oromoon abaluun nuuf gadhiisaa jedhee gaafatu miti. Yeroon yeroo itti Ashaagree shantama garafanii ari’anii ijoollee ofii ofiin gadhiisifatani. Ulfina ofitti gochuus ta’e salphina filachuun harkuma keenya jira. #Abiy_Must_Go
THE NOBLE LAUREATE USING COVID19 AS WEAPON AGAINST CIVILIANS?